Archive du 20170906
2018 : Mailhol sy Mme Shabberah Hisy ho tapaka lalandra
“Hapetraka eo amin’ny fitondrana amin’ny alalan’ny fifidianana aho”, hoy Pastera Mailhol, “Vehivavy no ho filoha manaraka eo”, hoy indray kosa i Mme Shabberah.
Fiarahamonina Malagasy Tsy manana kolontsaina politika
Fahaleovantenan’ny CENI Mbola manalasala
Nivory niaraka tamin’ny komitim-pikarakarana fifidianana eo anivon’ny SACEM na ilay tohana ho an’ny fampandehanana ny fifidianana eto amintsika teny amin’ny biraony eny Alarobia, omaly talata 5 septambra,
Victor Manantsoa Tsy tokony hirosoana ny fifidianana
Tsy tokony hiroso amin’ny fifidianana isika raha toa ka mbola ho toy ny endri-pifidianana hatramin’izay no hiseho amin’ny taona 2018, hoy ny minisitry ny fampianarana teknika teo aloha, Manantsoa Victor.
Izao izahay vao fantatra !
Bonjour Jean ! Ataoko manokana mihitsy ny fiarahabana anao anio sao mba izay no mari-panajana any aminareo any.
Fitsarana Ambony Toamasina Nodorany ny efitranom-pitsarana
Tranga tsy fahita ity niseho teo anivon’ny fitsarana ambaratonga ambony tao Toamasina ny talata tokony ho tamin’ny 9ora sy sasany maraina ity.
Mpiasan’ny CUA namafa lalana Maty nodonin’ny moto
Nodimandry vokatry ny herisetra nihatra taminy ny mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, omaly,
Imerintsiatosika Mitohy ny fanamboaran-dalana
Mitohy ny asa fampandrosoana ny tanàna tanterahin'ny kaominina ambanivohitra Imerintsiatosika.
Mpanamory fiaramanidin-dRavalomanana Hotsaraina anio ny raharaha nahafaty azy
Hiakatra fitsarana eny Anosy anio alarobia 6 septambra amin’ny 8 ora maraina ny raharaha nahafatesana lehilahy iray mpanamory fiaramanidin’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, izay maty tamin’ny volana desambra 2015.
Fanararaotam-paty no betsaka !
Samy milaza azy ho mahita ny hoavin’ny firenena daholo ny olona maro eto amintsika, indrindra fa ny mpitondra fivavahana amina Fiangonana zandriny maro,
Vatosoa Seha-pihariana tsy voafehin’ny Malagasy
Firenena voalohany mamatsy ny 45%-n’ny vokatra safira manerantany i Madagasikara, hoy ny atontanisa farany navoakan’ny iraka ekonomika frantsay.
Ranohira Raikitra ny Festival Karitaky
Tonga eo amin’ny andiany faha-9 ny Festival Karitaky amin’ity taona ity, izay hetsika entina indrindra hampisongadinana ny kolontsaina Bara.
Fandraharahana Ampirisihina hifaninana ny tanora
Toy ny fanaony isan-taona dia mikarakara fifaninanana ho an'ireo tanora mpandraharaha Malagasy indray ny banky BNI Madagascar (TJE 2017).